Tag: lazan'ny mailaka | Martech Zone
Tag: lazan'ny mailaka
Zoma, Desambra 25, 2020 Zoma, Desambra 25, 2020 Douglas Karr
Raha manana base mpamorona habe manan-danja ianao ary voatery nifindra tany amin'ny mpamatsy serivisy mailaka vaovao (ESP), mety efa nandalo fanaintainana ianao tamin'ny famongorana ny laza vaovao. Na ny ratsy kokoa… tsy niomana ho amin'izany ianao ary sendra olana tamin'ny iray amin'ireo olana vitsivitsy: nahazo fitarainana ilay Mpamatsy Serivisy mailaka vaovao ary nanakana anao tsy handefa mailaka fanampiny mandra-pandaminanao ny olana. Internet
Alatsinainy Martsa 19, 2018 Alakamisy, Septambra 24, 2020 Douglas Karr
Mifantoka betsaka amin'ny marketing amin'ny mailaka izahay tato ho ato satria tena mahita olana maro amin'ity orinasa ity izahay. Raha manohy mandrangitra anao amin'ny fitomboan'ny lisitry ny lisitry ny mailaka ny mpanatanteraka iray, dia tena mila manondro azy ireo amin'ity lahatsoratra ity ianao. Ny zava-misy dia, arakaraka ny habe amin'ny haben'ny lisitra mailakao no mety manimba ny fahombiazan'ny marketing amin'ny mailakao. Tokony hifantoka amin'ny isan'ny mpiserasera mavitrika aminao ianao